काेराेनाका कारण ५३६९९ जनाकाे उद्धार, कुन देशबाट कति फर्के ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more काेराेनाका कारण ५३६९९ जनाकाे उद्धार, कुन देशबाट कति फर्के ?
काेराेनाका कारण ५३६९९ जनाकाे उद्धार, कुन देशबाट कति फर्के ?
भदौ १४ गते, २०७७ - ०८:०९
काठमाडाैं । सरकारले विदेशमा कोरोनाका कारण समस्यामा परी फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका हाल सम्म ५३ हजार ६९९ जना नेपालीलाई उद्वार गरेको छ । सिसिएमसिले जारी गरेको आजसम्मको तथ्याङकअनुसार ५८ देशमध्ये सबैभन्दा बढी १५ हजार २१० जना नेपाली युएइबाट फर्किएका छन् ।
आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ–दोस्रो फर्किने मुलुक मलेसियाबाट आठ हजार २७६ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । तेस्रोमा साउदीबाट आठ हजार २२८, कुवेतबाट छहजार ३२० जना नेपाली स्वदेश आएका छन् । यस्तै, कतारबाट पाँच हजार ७३९ जना स्वदेश फर्किएका छन् । यो अवधिमा जापानबाट एकहजार २८२ जना नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् भने अस्ट्रेलियाबाट एक हजार ८७ जना स्वदेश फर्किएको उल्लेख छ । दक्षिण कोरियाबाट ९६७ जना फर्किएकोमा छिमेकी देश बङ्गलादेशबाट ८६५ जना फर्किएको सिसिएमसिले बताएको छ ।
कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा पहिला उद्धार गरिएको छिमेकी मुलुक चीनबाट अहिलेसम्म २०८ जनाको उद्वार गरिएको छ ।
फर्कनै पर्ने अवस्थामा परी सोमालियाबाट एकजना मात्रै नेपाली स्वदेश फर्किएको सिसिएमसिले सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
यस्तै सयभन्दा कम सङ्ख्यामा नेपाली स्वदेश फर्किएको देशहरुमा इराक, स्विजरल्याण्ड, इरान, ईथोपिया, ट्युनिसिया, सुडान, नाइजेरिया, युगाण्डा, पोर्चुगल, फ्रान्स, स्पेन, ग्रिस आदि रहेका छन् ।
सरकारले विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने काम अहिले पनि जारी राखेको छ ।
भदौ १४ गते, २०७७ - ०८:०९ मा प्रकाशित